﻿Komputermen पृष्ठ 3
यो BIOS के हो
BIOS (मूल आगत/निर्गत प्रणाली, मूल इनपुट-आउटपुट प्रणाली) - को Motherboard Chipset को एक भण्डारण गरिएको छ कि एक कार्यक्रम। तपाईं सञ्चालन प्रणाली स्थापना गर्दा तपाईंले केही BIOS सेटिङहरू संग परिचित प्राप्त गर्न सक्छन्। यी सेटिङहरू मेरो लेखमा लेखिएका छन् बारेमा "सुरु स्थापना विन्डोज। BIOS सेटिङ"। BIOS महत्त्वपूर्ण कार्य कार्य गर्दछ। कम्प्युटर बारी मा तुरुन्तै कम्प्यूटर घटक परीक्षण सुरु हुनेछ जो BIOS, सुरु गरिएको छ तुरुन्त पछि। परीक्षण सफल छ भने, नियन्त्रण बारी मा सञ्चालन प्रणाली चल्छ जो हार्ड ड्राइभ, हस्तान्तरण गरिएको छ। तिनीहरूले, असक्षम, समावेश परिवर्तन, प्रदर्शन, आदि:एउटा सानो सबरुटीन BIOS सेटअप हामी हाम्रो कम्प्युटर उपकरणहरू नियन्त्रण गर्न सक्छ अर्डर गर्ने BIOS सेटअप मा प्राप्त गर्न, तपाईं बस तुरुन्तै कम्प्युटर खोल्दै पछि डेल कुञ्जी थिच्न। तपाईं स्वाभाविक त्यहाँ भण्डारण गरिएका BIOS सेटअप मा बनाउन र त्यसपछि कम्प्युटर बन्द सेटिङ सबै। सायद यो Motherboard (ट्याब्लेट) मा स्थापित छ जो ब्याट्री, कारण छ। स्वाभाविक, यो अनन्त ब्याट्री काम गर्न सक्दैन, र 4-5 वर्ष पछि यो लाग्न सक्छ। सामान्यतया, एक शायद एक भन्दा बढी कम्प्युटर 5-6 वर्षसम्म रहनेछ देखि, छैन प्रयोगकर्ता पक्रेको छ। तर, तपाईं BIOS सेटअप केही गलत सिस्टम घडी जाने बन्न, गायब गर्न थाले याद भने, त्यसपछि ब्याट्री प्रतिस्थापित हुनुपर्छ। त्यसो गर्न, खोल्न प्रणाली कवर, मा एक ट्याब्लेट को रूप मा Motherboard ब्याट्री प्राप्त, एक पेचकस यसलाई हटाउन र एउटा नयाँ यसलाई प्रतिस्थापन (। फोटो हेर्नुहोस्)। आफ्नो विशिष्ट मामला लागि BIOS सेटअप मार्फत आफ्नो BIOS संस्करण र हार्डवेयर सेटिङहरू बारेमा थप जान्नुहोस्, तपाईंले आफ्नो Motherboard मा राहदानी मा पढ्न सक्नुहुन्छ।
माइक्रोसफ्ट विन्डोज लाइभ अनिवार्य 2011 बिटा 2
विन्डोज लाइभ अनिवार्य को पहिलो बिटा संस्करण जुन को 24 मा आए। प्याकेज विन्डोज लाइभ चलचित्र निर्माता, मेल, लेखक, सिंक, र परिवार सुरक्षा जस्तै यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश छन्। नयाँ विन्डोज लाइभ विकास टीम मा विशेष विन्डोज7प्रयोग तसर्थ, सबै अनिवार्य विन्डोज लाइभ अनुप्रयोगहरूको लाभ अब नयाँ Windows7Jumplist मतलब संग रिबन-इन्टरफेस र एकीकरण प्रयोग केन्द्रित छ। कार्यक्रम विन्डोज लाइभ समन्वयन को प्याकेज समावेश त्यहि समयमा वेब प्रयोगकर्ता फाइलहरू सिङ्क्रोनाइज, र कम्प्युटर को एक किसिम। नयाँ उदाहरणका लागि, प्याकेज सम्भावनाहरू समावेश, मा विन्डोज लाइभ फोटो गैलरी र फोटो-मा भएको पेटी सुधार अनुहार पहिचान, एक मा विभिन्न फोटो मिश्रण को संख्या। विन्डोज लाइभ अनिवार्य डाउनलोड 2011 बिटा2हुन सक्छ यहाँ । नम्बर गठन - 15.
को NUL र con फाइलहरू हटाउँदै | विन्डोज को विश्वकोश
con र NUL फाइलहरू हटाउने मदत गर्नेछ र पहिले वर्णन विन्यास । । वास्तवमा, Win32 उपयोगिता को कुनै पनि तपाईं जस्तै फाइलहरू हटाउन अनुमति छैन। उपयोगिताओं छैन Win32 वातावरण लागि समाधान लागू गरिएको छ। उदाहरणका लागि, प्याकेट स्रोत किट मा उपयोगिताओं POSIX वातावरण प्रदान गर्दछ। यो फाइल हटाउन, तपाईं उपयोगिता RM.
विन्डोज9मा भण्डारण Sense स्क्रिनसटहरू
केही दिन पहिले हामी विन्डोज सञ्चालन प्रणाली को अर्को संस्करण मा विन्डोज फोन 8.
ग्याजेट Windows XP समर्थन फ्रेम XP मा काम गर्दैन
ग्याजेट को Windows XP लोगो, शब्द र ldquo देखाउँछ;
कसरी सम्पर्क मा एक समूह हटाउन
Vkontakte सामाजिक सञ्जाल दिन्छ प्रयोगकर्ताहरूले समुदाय मार्फत चासो। यो खण्ड समूह र सार्वजनिक पृष्ठ प्रस्तुत। सबै ठूलो कम्पनीहरु, समाचार एजेन्सीहरूले र चिरपरिचित व्यक्तित्व Vkontakte आफ्नै पेज। साथै, कुनै पनि प्रयोगकर्ता को कुनै पनि जानकारी सजिलै आफ्नो समुदाय सिर्जना र यसलाई थप्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई अब इच्छुक छन् कि सम्पर्क समूह हटाउन कसरी, र अन्य प्रयोगकर्ता द्वारा सिर्जना गरिएको समुदाय छोड्न कुरा यस लेखमा। म एक सम्पर्क समूह कसरी मेट्ने गर्छन् Vkontakte मा एक समूह मेट्न, तपाईंले यसको व्यवस्थापक हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल समुदाय हटाउन कुनै प्रत्यक्ष समारोह छ। तर, यो सबै सहभागीहरू हटाउने र केही मापदण्डहरु सम्पादन गरेर गर्न सकिन्छ। चरण निर्देशन गरेर चरण विचार गर्नुहोस्: "मेरो समूह" जानुहोस् र तपाईंले मेट्न चाहेको एउटा चयन गर्नुहोस्। "सामुदायिक व्यवस्थापन" मेनु पाठ मा क्लिक गर्नुहोस्। "सदस्य" ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। म्यानुअल क्लिक गरेर तिनीहरूलाई प्रत्येक हटाउन सही फोटो अगाडि "समुदाय हटाउनुहोस्"। को सहभागी प्रेस सुरु गर्न "टाउको पठाउनुभयो" नेता हो भने। ट्याब "सूचना" जानुहोस् र नाम र पृष्ठ को ठेगाना परिवर्तन। यो "समूह हटाइयो" सुझाव दिन्छौं लेख्नुहोस् नयाँ नाम। यो अवस्थामा, समुदाय एक साइट अग्रिम र स्थायी रूपमा नष्ट पाउन सजिलो हुनेछ। , "समूह वर्णन", "विषयवस्तु समुदाय" र "स्थान" अनुच्छेद मा "वेबसाइट" जानकारी मेट्नुहोस्। सबै सामाग्री बन्द गर्नुहोस्:"पर्खाल", "फोटो", "भिडियो", "प्लेलिस्ट", "दस्तावेज", "फोरम", "सामाग्री"। यस मा "समूह प्रकार," "बन्द गरियो" चयन गर्नुहोस्। सबै जानकारी सम्पादन भएपछि, तल "सुरक्षित गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्। "लिंक" क्लिक गर्नुहोस्। उपलब्ध भएमा, सबै सन्दर्भहरू हटाउनुहोस्। तपाईंको परिवर्तनहरू बचत गर्नुहोस्। मुख्य समुदाय पृष्ठमा फर्कनुहोस् र "निकास समूह" क्लिक गर्नुहोस्। यस प्रक्रिया र यसका सामग्रीहरू बन्द सफा पूर्ण समूह हटाउन गर्दैन, तर पूर्ण र यसलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई उपलब्ध बनाउन। कृपया तपाईं एक समूह सिर्जना भने छैन, र बस मा हुन्छन् वा मार्गदर्शन मा प्रविष्ट गर्नुहोस्, तपाईँले यसलाई सहभागीहरू र निर्माता मेट्न सक्दैन। कसरी सार्वजनिक सम्पर्क पृष्ठ हटाउन तपाईं माथि वर्णन प्रक्रिया एउटा सार्वजनिक समान सिर्जना गरेका पृष्ठ हटाउने प्रक्रिया। खोज "मेरो समूह" मा एक सार्वजनिक पृष्ठ लागि। "सामुदायिक व्यवस्थापन" मेनु पाठ पृष्ठ मा क्लिक गर्नुहोस्। "हिस्सेदार" मा सबै सदस्यहरू र प्रबन्धकहरू हटाउन। "सूचना" मा नाम र पृष्ठ को ठेगाना परिवर्तन, साथै क्षेत्र बाँकी सफा गर्न। crease "लिंक" मा सबै डेटा मेट्नुहोस्। तपाईं माथिको सबै कदम पूरा गरेको छ भने, एक सार्वजनिक पृष्ठ सदस्य कुनै पनि समावेश हुने छैन र यो पत्ता लगाउन अत्यन्तै कठिन हुनेछ। तर, समूहमा यसको विपरीत, तपाईं पर्खाल बन्द गर्न सक्दैन, त्यसैले सबै पोस्ट सार्वजनिक पृष्ठमा रहनेछ। तपाईंले तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले माथि दाहिने कुना मा एक्स क्लिक गरेर स्वयं उनलाई मेटाउन हुनेछ। पर्खाल साफ भएपछि, "सदस्यता खारेज" पाठ पृष्ठ क्लिक गर्नुहोस्। सम्पर्क मा समूह कसरी हटाउन तपाईं अन्य प्रयोगकर्ता वा तेस्रो पार्टी द्वारा सिर्जना समुदायको एक सहभागीले, हो भने, त्यसपछि हटाउन यो असफल। तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ कि सबै - अद्यावधिक सदस्यता खारेज गर्न छ। यो के गर्न, "मेरो समूह" जाने उपयुक्त समूह वा सार्वजनिक पृष्ठ पत्ता लगाउन र "निकास समूह" वा "सदस्यता खारेज" मा क्लिक गर्नुहोस् समुदाय पाठ अन्तर्गत मेनुमा। , दुर्भाग्य, यो असम्भव छ एकै समयमा सम्पर्क मा सबै समुदाय हटाउनुहोस्। यस्तो आवश्यकता खडा भने, माथि वर्णन रूपमा, प्रत्येक समूह को मार्गदर्शन हटाउने प्रदर्शन गर्न हुनेछ।
स्मार्टफोन लागि जारी विन्डोज 10 गठन 10051
प्रतिज्ञा रूपमा, माइक्रोसफ्ट स्मार्टफोन विन्डोज 10 को एक नयाँ परीक्षण गठन जारी गरेको छ। विन्डोज भित्रिया कार्यक्रम यसको सहभागीहरू परीक्षण आमन्त्रित गरिन्छ गरेर। मोबाइल उपकरणहरूमा विन्डोज 10 प्राविधिक पूर्वावलोकन को नयाँ संस्करणमा गठन नम्बर 10051 प्राप्त र धेरै नयाँ सुविधाहरू ल्याएको छ। साथै, तपाईँले यसलाई WP-स्मार्टफोन Lumia परिवारको सबै भन्दा मा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। खासगरी, विन्डोज 10 गठन 10051 उपयुक्त छ: Lumia लाइन: 1020, 1320, 1520, 520, 526, 530, 530 दोहोरो सिम, 535, 620, 625, 630, 630 दोहोरो सिम, 635, 636, 638, 720, 730 , 730 दोहोरो सिम, 735, 810, 820, 822, 830, 920, 925, 928;